Emeputa Viga Faucet
Ikeping City Garden Sanitary Ware Co., Ltd., Onye na-eweta akara VIGA, dị na Shuikou Town, China. A maara ya dịka "Kingdom of Plumbing and Sanitary Ware" ma kwụsie ike n'ime asọmpi ahụ. Na a ụba nke ahụmahụ na ubi nke mmepe, imewe, na n'ichepụta nke fosets, anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa amị azụmahịa na residential fosets na dị ka nke ọma dị ka ngwa. Site na ndebanye aha 1000,000 registered, anyị mepere ụzọ anyị n'April, 2008.
Anyị nwere ngwaahịa na ihe karịrị usoro 60. Ndị a gụnyere ọtụtụ mmiri mmiri, dị ka Ime ụlọ ịsa ahụ, ebe a na-asa ahụ, ebe a na-asa mmiri, na ebe a na-asa ahụ. Nhọrọ anyị gụnyekwara kọlụm Shower, ngwa a na-asa ahụ na ngwa igwe mmiri. Ngwaahịa anyị na-enye igwekota ọkụ na-ekpo ọkụ na mmiri oyi, otu mmiri oyi na mmiri usoro mmiri na-ejikwa ya wee mezuo mkpa niile n'okpuru nche anwụ nke ụlọ ọrụ anyị.
Nke iguzosi ike n'ezi ihe, iru ihe na ihe ohuru bu ihe mejuputara isi ihe emere site na VIGA hiwere. Ruo taa, ọ gara n’ihu ịbụ ihe mbụ n’ihe niile anyị na-eme. Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa ọrụ na-ekpo ọkụ ma na-eche echiche yana ngwaahịa dị elu na-ebi ndụ kwekọrọ na anya gị. N'otu oge ahụ, anyị na-agbakwa mbọ oge niile ịkwalite ma bulie ogo ngwaahịa ụlọ ọrụ tozuru oke anyị n'ụzọ niile anyị nwere ike.
Anyị na-ewere mpaghara dị 4 square 500 n'ime Shuikou Town, nke a na-akpọ "Kingdom of Plumbing and Sanitary Ware".
Anyị nwere ngalaba karịrị iri itoolu iji lekọta mkpa gị niile. Ndị a gụnyere ngalaba ahịa, ngalaba na-emepụta ihe, ngalaba nzụta, ngalaba R&D, ngalaba na-achịkwa njikwa dị mma, ebe a na-ahụ maka ịkpụzi igwe eji arụ ọrụ, ebe a na-azụ polishing, yana usoro mgbakọ, ụlọ nkwakọba ihe ahaziri ahazi. na ndị ọzọ.
Ejiri VIGA Foset nke mmiri na-ewu ewu n'ụwa niile. Nwere ike ịchọta ngwaahịa anyị na mba dịka Peru, Italy, Portugal, Germany, Oman, UK, Israel, Finland, Australia, USA, Canada, Mexico, Brazil, France, Singapore, Netherlands, Uruguay, Saudi Arabia, Colombia, Russia, Poland, Panama, New Zealand, Argentina, Norway, Malta, Spain, Serbia, Mauritius, Dubai, Myanmar, United Arab Emirates, Ireland, Austria, Ecuador, Malaysia, Hungary, Slovenia wdg. Nke a na-ekwu maka ọkwa ọrụ anyị yana ebumnuche anyị iji nyere aka hụ na onye ọ bụla chọrọ otu n'ime mmiri anyị nwere ike ịme.
Anyị ji nganga jide nhọrọ asambodo, gụnyere CUPC, ISO, OA, ọtụtụ Asambodo Akwụkwọ ikike iche na Asambodo ụlọ ọrụ dị elu. Ozo uzo ozo anyi ji elebara anya na iwebata ndi mmadu na ihe anyi n’eme.